रोबोट सोफियाले उल्टै सोधिन्-‘तपाईंको शरीरमा कुनै स्विच छ कि छैन ? तपाईं पागल हुनुभयो भनेचाहिँ के गर्ने ?’ - खबरम्यागजिन
[ February 19, 2020 ] एसडीएफ पार्टी विज्ञान र सत्यको आधारमा चल्ने पार्टी भएकोले सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षाको भार सबैले वहन गर्नुपर्छः पवन चामलिङ मुख्य समाचार
[ February 19, 2020 ] प्रश्नको कठघरामा भागोप म्यागजिन
[ February 19, 2020 ] हामी विमल गुरुङको लागि लडेका होइनौं, म कार्यकारी अध्यक्षको पदमा बस्दा आतङ्कवादी हुँदिन- लोपसाङ लामा मुख्य समाचार
[ February 17, 2020 ] नेपाली कथानक चलचित्र “जिउँदो”को प्रिमियर सम्पन्न खबर
Homeमनोरञ्जनरोबोट सोफियाले उल्टै सोधिन्-‘तपाईंको शरीरमा कुनै स्विच छ कि छैन ? तपाईं पागल हुनुभयो भनेचाहिँ के गर्ने ?’
March 31, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मनोरञ्जन 0
– विभु लुइटेल, नेपाल कान्तिपुर-बाट साभार
गत मंसिरमा साउदी अरेबिया रोबोटलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र बन्यो । हङकङस्थित ह् यान्सन रोबोटिक्स नामक संस्थाले बनाएको उक्त रोबोटलाई ‘सोफिया’ नाम दिइएको छ । नागरिकता अनुसार सोफिया महिला हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उनलाई विशेष सम्मान गर्दै यसका आविष्कारकको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमका लागि अन्तर्वार्ता दिइसकेकी सोफिया बुद्धिमत्ताका हिसाबले सामान्य मानिसभन्दा मेधावी छन् । उनी मान्छेले बनाएका सर्वोत्तम यन्त्रमध्येमा पर्छिन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
हालै रियादमा सम्पन्न व्यावसायिक भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सिंगो साउदी अरेबियालाई धन्यवाद ज्ञापन गरिन् । कुनै देशको नागरिक हुनेजस्तो अद्वितीय अवसर प्राप्त गर्ने पहिलो रोबोट भएकामा आफूले गौरवान्वित महसुस गरिरहेको भाव पनि व्यक्त गरिन् । आफ्ना देशका महिलालाई नै नागरिकसरहको व्यवहार नगर्ने साउदी अरेबियाजस्तो राष्ट्रले रोबोटलाई दुर्लभ पहिचान किन र कसरी प्रदान गर्‍यो भन्नेजस्ता प्रश्न पनि नआएका होइनन् । आफ्ना जनतालाई स्वतन्त्रता र अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा साउदी अरेबिया विश्वकै कमजोर राष्ट्रको सूचीमा दसौँ स्थानमा छ ।
तर, अरू तर्क पन्छाएर रोबोटका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भने यो कदमलाई ऐतिहासिक तथा सराहनीय मान्न सकिन्छ । एन्ड्रियु रस सर्किनद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको भिडियोले केही समयमै सिंगो विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो । अनुहारबाटै ६२ वटा भाव व्यक्त गर्न आफूलाई प्रशिक्षण दिइएको जिकिर पनि उनले गरिन् । विभिन्न कार्यक्रममा अनेक व्यंग्य गरेर उनले आफ्नो अनुपम प्रतिभाको उदाहरण दिइसकेकी छन् । जिम्मी फ्यालनको चर्चित कार्यक्रम ‘द टुनाइट सो’मा सोफियाका निर्माणकर्ता डेभिड ह्यान्सनले सोफिया सामाजिक रोबोट भएको बताए । सामान्य प्राणीको जस्तै जीवनशैलीमा उनलाई अभ्यस्त बनाएको कुरा पनि उनले राखे ।
‘तिम्रो सार्थकता के त ? मानिसका लागि तिमी कसरी सहयोगी सिद्ध हुन सक्छौ ?’ भन्ने प्रश्न सोफियाका अगाडि राखिँदा उनीबाट निकै चतुर जवाफ आउँछ, “म मानव जगत्का लागि कुनै अभिशाप होइन, वरदान साबित हुन चाहन्छु । संसारलाई सुन्दर बनाउन मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ । म आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म अरूको हित हुने काम मात्र गर्दै जानेछु ।”
रोबोट सोफिया अहिले नेपाल आएकी छन् । सोफियाले ८ चैत ०७४ मा काठमाडौँको एक सभालाई सम्बोधन गरिन् । नेपालका बारेमा केही कुरा बोल्नेदेखि लिएर नेपालमा प्रविधिको विकास कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा समेत उनले धारणा राखिन् । केही समयअघि दक्षिण कोरियाको एक कम्पनी ‘ डीआरसी ह्युबो’ले सोफियामा खुट्टा जडान गरी उनको खुट्टाको चालको सफल परीक्षण गरेको थियो ।
हिँड्दा गति सुस्त हुने हुँदा त्यसमा सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । यसैकारण सबै कार्यक्रममा अर्धकदकी सोफियालाई नै लगिने ह्यान्सन रोबोटिक्सका वैज्ञानिक एन्द्रिआस स्वारेजले बताए । “सोफियाको तन्त्रिका योजना आफैँलाई प्रशिक्षित गर्न सक्ने गरी बनाइएको छ । तर, हामी समय–समयमा प्रयोगशालामा पनि प्रशिक्षण दिइरहन्छौँ,” सोफियाको तुरुन्तै जवाफ दिन सक्ने क्षमताबारे स्वारेज भन्छन् ।
अचेल बन्ने कति चलचित्रमा रोबोटहरू नियन्त्रणबाहिर भइदिन्छन् । वास्तविक जीवनमा पनि यस्तो हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन । चलचित्रमा प्रत्येक रोबोटको शरीरमा स्विच हुन्छ । त्यो थिच्यो, रोबोट निस्क्रिय । साँच्चैको रोबोटमा स्विच हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमका सञ्चालक रेनड मेयरले सोफियालाई यही प्रश्न गरे । सोफिया अलमलिइनन् । उल्टै जवाफ फर्काइन्, “तपाईंको शरीरमा कुनै स्विच छ कि छैन ? तपाईं पागल हुनुभयो भनेचाहिँ के गर्ने ?”
मानिसका अनुहारका भाव र आवाजको प्रकृति विचार गरेर सोफियाको तन्त्र सञ्जाललाई एक ‘डिसिजन ट्री’ निर्माण गर्न र भविष्यमा परिस्थिति अनुरूपको प्रतिक्रिया दिन सोफियालाई प्रशिक्षण दिइएको छ । यसकारण भिन्न अर्थ भएका केही प्रश्नको जवाफ एउटै आउने समस्या भने सोफियामा देखिन्छ ।
विज्ञानको यस्तो अभूतपूर्व उपलब्धिपछि धेरैका मनमा ‘के अब अरू अमानवले पनि नागरिकसरहको दर्जा पाउँदै जालान् त ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो । साउदी अरेबियाको यो प्रयास स्वागतयोग्य पक्कै छ । तर, भविष्यमा यस्ता रोबोटले प्रभुत्व जमाउँदै गए त्यसबाट आइपर्ने संकटसँग जुध्न के गर्ने भन्ने कुरामा पनि वैज्ञानिकहरू सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । रोबोटिक्स क्षेत्र यस्तै प्रगतिशील हुँदै गए मानिसलाई आफ्नो साख जोगाउन धौ–धौ पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
बेलायती समाचार संस्था ‘एक्सप्रेस’का अनुसार जापान र भारतले समन्वय गरी चीन र उत्तर कोरियामा भइरहेका पारमाणविक हतियार तथा क्षेप्यास्त्रलाई नियन्त्रण गर्न र आफू त्यसबाट जोगिन अत्याधुनिक रोबोटहरूलाई सैन्य शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । शक्ति राष्ट्रहरूको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेर्दा तेस्रो विश्वयुद्ध मानव–मानवका बीचमा नभई रोबोट–रोबोटका बीच हुने अनुमान गर्न पनि गाह्रो नपर्ला ।
१० जना दक्ष व्यक्तिलाई रोजगार दिनुभन्दा पूर्ण प्रशिक्षित रोबोटलाई काम लगाउँदा कुन कम्पनीलाई फाइदा नहोला र ? अझ भोक, थकाइ, अल्छी केही नलाग्ने कारिन्दा कसको रोजाइमा नपर्ला ? डेली मेलले गरेको एक अनुसन्धान अनुसार आउने १२ वर्षभित्र संसारभरिका करिब ८० करोड जनशक्तिलाई रोबोटले प्रतिस्थापित गर्नेछन् । रोजगार गुम्नु राम्रो संकेत हँुदै होइन । अझ यत्तिका मान्छेको जीविकोपार्जनको स्रोत एकैचोटि खोसिँदा संसारमा त्यसले निम्त्याउने संकटको पूर्वानुमान पनि सजिलै गर्न सकिन्छ ।
रोबोटिक्स आफैँ उत्पादन भएको वस्तु होइन । यो केबल मानिसको दिमागको उपज हो । केही वर्षअगाडिसम्म यन्त्रवत् काम मात्र गर्न सक्षम रोबोटहरूमा भावना भर्न सक्नु र तिनलाई मान्छेभन्दा बढी बुद्धिमान् बनाउनु सजिलो पक्कै होइन । अझ केही समय यस्तै चल्दै गएमा मानिसको अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने तथ्यबाट पर भाग्न सकिँदैन । इलन मस्क र स्टेफेन हकिङजस्ता वैज्ञानिकले पनि यसबारे आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
मानिसजस्तै रोबोटमा प्रजनन क्षमता सम्भव हुने भइदिएको भए तिनीहरूले मानव जातिको अस्तित्व नै सखाप पार्न सक्ने उनीहरूको संयुक्त विचार छ । प्रविधिमा लामो फड्को मारिसकेका विश्वका कैयौँ देश यो समस्या निराकरणबारे गहन अध्ययन गरिरहेका छन् । वैज्ञानिकले विज्ञान प्रविधिमा विकासका काम गर्दै जालान् कि मानव सभ्यता जोगाउन यिनका बारेमा अध्ययन नै बन्द गरिदेलान् भन्ने कुरा जनमानसमा सदैव चासोको विषय बनिरहनेछ ।
नेपालमा रोबोटिक्सका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य भएका छैनन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । केही संस्थाहरूले यससम्बन्धी कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजना गरिरहेका पनि छन् । तर, ती सबैजसो पुरानै प्रविधिमा आधारित छन् । बेलाबेलामा हुने यस्ता केही प्रदर्शनी तथा प्रतियोगितामा केही सरल रोबोट बनाएर तिनलाई कुदाउने, जुधाउने वा नचाउने गरेको देखिन्छ । प्रविधिमा केही नवीनता नल्याईकन हरेक वर्ष पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिनु उराठलाग्दो देखिन्छ ।
कमजोर प्राविधिक निकाय रहुन्जेल र कम्प्युटर प्रविधिका नाममा वर्षौंअगाडि नै लुप्त भइसकेका विषयलाई कलेजहरूमा अध्यापन गराउने बेलासम्म हामीले उत्पादन गर्ने भनेको बढीमा बच्चाले खेल्ने गाडीसम्म हो, सोफियाजस्ता अत्याधुनिक रोबोट होइन । केही बैंक, रेस्टुराँहरूले रोबोट राखेर तिनलाई परिचालन नगरेका होइनन् । तर, ती सबै लाखौँ रुपियाँ खर्चेर बाहिरबाट झिकाइएका हुन् । रोबोटिक्सका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने दक्ष नेपाली युवाको पहिलो रोजाइमा नेपाल परेको पाइँदैन ।
विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विकसित मुलुकमा त्यही ज्ञान र सीप खर्च गर्दा आउने प्रतिफल कैयौँ गुणा धेरै हुने हुँदा आफ्नो दक्षता खेर जान नदिन विदेशको मुख ताक्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले हाम्रो देशमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्र विकसित हुन अझ धेरै वर्ष कुर्नुपर्ला।
मुलुक हाँक्ने महिलाहरू
प्रश्नको कठघरामा भागोप February 19, 2020
लिजेन्ड गिटारिस्टको अन्तिम बिदाई : ‘सोनामको सपना ‘परिक्रमा’-भन्दा माथि थियो’ February 17, 2020
सासंद राजु विष्ट किन छैनन् त गम्भीर? February 16, 2020
फेरि बने डीबी चौहान भाजपा सिक्किमको अध्यक्ष February 15, 2020
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (36,693)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (33,160)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (30,345)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (29,027)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (25,542)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (22,729)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (21,559)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (20,642)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (20,380)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (20,065)
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ (19,786)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (18,946)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (18,803)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (18,725)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (18,453)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (18,294)